Maitiro ekuita - Ikkaro
kudzidziswa >> Cómo hacer
Nzira yeku DIY kana kuzviita iwe pachako inzira yehupenyu.
Gadzira zvinhu kubva pakutanga, gadziridza uye kubvarura zviripo, zvishandise zvakare uye wozvigadzirisazve pazvinhu zvakasiyana zvachose nezvakagadzirwa uye zvatisingazombofungidzira kuti zvinogona kushandiswa.
Iyo Maitiro ekuita yakachena fungidziro, kugona, kuda kuziva.
Tarisa uone edu maitirwo ekugadzira uye DIY
Nzira yekugadzira electromagnet
Electromagnetic mudziyo une midziyo yekutora magineti kana magetsi achipfuura nepacoil..
Kugadzira yekumba kwakareruka sezvatichaona iko zvino. Iwe unongoda iyo enameled waya yemhangura uye chimwe chinhu senge musimboti kana muviri, chimwe chinhu ferromagnetic senge screw kana chidimbu chesimbi.
Tinogona kusiyanisa zvinhu mumhando nhatu: ferromagnetic, paramagnetic uye diamagnetic zvichienderana nemabatiro azvinoita kana iine magineti.
Ndicho kuyedza zviri nyore zvekuti zvakanakira kuita nevana uye kuvasuma kunyika yesainzi uye tekinoroji.
Munyaya ino ini ndichatsanangura sei distill mvura nenzira dzakasiyana-siyana. Tichaonawo kuti mvura yakasvibiswa chii, kushandiswa kwayo uye musiyano nemamwe marudzi emvura.
Kuti tinzwisise zvakanaka maitirwo emvura inonatswa tinofanirwa kunzwisisa kuti chii chinonzi distilled water.
Mvura yakasvibiswa Imvura yakabviswa tsvina neiyoni nemunyu zvairimo.
Nzira yekuchera mvura
zvose nzira dzacho dzinobva pane distillation yemvura, ndiko kuti, mukupfava kwayo uye nekukonyedzwa kunotevera.
Distillation inzira yekuparadzanisa, asi kupatsanurwa kwemuviri, KWETE kemikari kuita.
Ngatitsanangurei maitiro ekugadzira mapepa ekugadzira nezviratidzo zvaJan Barbé anogadzira bepa rehunyanzvi nenzira yehunyanzvi. Unogona kuzviita pamba kana uchida uye wodaidza bepa rekugadzira asi. Chokwadi ndechekuti chishamiso chaicho sezvo chinotsanangura maitiro ese, hows uye nei.
Ini ndinotora mazano makuru kubva muvhidhiyo uye ndinowedzera zvirevo zvangu. pamusoro pezvese tichienzanisa maitiro aya neiyo yekugadzirwa kweWashi.
Ndinovimba vhidhiyo iri online kwenguva yakareba, asi kana ikarasika zvirinani izvo zvinoratidza zvicharamba zviripo.
Mushure meizvi, isu tinongofanirwa kutanga kugadzira pepa redu rezvakasiyana zviitwa zveDI uye akasiyana magadget.
Zvichakuda iwe, Washi, bepa reJapan rekugadzira uye zvinyorwa zvedu pa Maitiro ekudzokorora mapepa
Kugadzira pasofa pallets
Mwaka uno wezhizha takachinja pasofa yakare yataive nayo imwe yatakagadzira kubva pamapallet. Chokwadi ndechekuti yanga isiri chirongwa changu, zano, chishuwo nebasa zvakaiswa nemukadzi wangu. Ino nguva ndakazvipira kuti ndifambise mapallet kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe uye kurara pasi kuti ndirare kana ndaungana.
Pallet masofa ari mufashoni. Ivo anokwezva, akanaka, ari nyore kwazvo kuvaka uye akanakira materu uye mapindu. Ivo vakajairika zvekuti ivo vanotengesa iyo kit kuti vaisimise kana iwo echinyakare makushiti.
Isu tasarudza yakapusa nzira yekuzviita. Kune misiyano yakawanda kwazvo pamasofa pallet, asi izvi zviri chaizvo, zvakapusa.
Tine zvikamu zvinoverengeka pamusoro penyaya iyi DIY uye pallets y Fanicha nePallets
Ngatione maitiro ekuita izvi zvakapusa catapult yevana inogadzirwa nemachira ehembe uye tumiti twu ice cream. Yakagadzirirwa vana. Kuti upedze nguva navo vachiivaka uyezve vachitamba kuvhura dzakasiyana mhando dzemapurojekiti.
Tichatora iwo mukana kutsanangura akasiyana mazano uye dhata nezve catapults munhoroondo nehondo zvinoenderana nezera remwana.
Ndiri kuzokudzidzisa iwe kuti uite drainer yakanyanyisa kupusa asi inoshanda kwazvo yemakofi capsules. Zviri nyore kwazvo zvekuti ndanga ndichifunga kuti ndoita dzidziso kana kwete, nekuti harisi danho nedanho, idanho rimwe chete. Asi ini ndoda aya ezuva nezuva-mhinduro izvo chero munhu anogona kuita nezvinhu zvezuva nezuva.
Asi izvo zviri pachena ndezvekuti munhu wese ane kaputi wemubiko wekofi, mune yangu Dolce Gusto, haakwanise kukanda kapuleti kure nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Nekuti isu tinosvibisa uye nekuti inodurura zvishoma nezvishoma uye marara anodonha kubva kwauri.
Kana iwe uri murimi wekofi iwe unogona kufarira izvi zvinyorwa zviviri nezve maitiro ekugadzira kofi roasters
Kofi inogocha nemuchina wekuwacha
Homemade roaster nehari
Tricks uye hacks kutora mifananidzo
Ndinozviwana ndiri a Kutora mifananidzo kwaCooph kunonyengera vhidhiyo uye kudhonza shinda ndinopedzisira ndanyorera yako YouTube chiteshi uye kushamiswa nekureruka kwematanho aanoshandisa uye nemhedzisiro yavanowana.
Zvarinotidzidzisa kuwana zvinoshamisa mhedzisiro kushinga kuyedza zvinhu zvitsva uye nekufungidzira kwakawanda. Kunyangwe hazvo zvirizvo, pakupedzisira ndinofungidzira kuti mhedzisiro yakawanikwa mukushandisa kweimwewo nzira yekushandisa inoshandiswa neunyanzvi uye amateur ichave isina kunaka. Ini ndinofunga izvi zvaizopa rondedzero ye «inotarisirwa / chaiyo» yatinoda kuona zvakanyanya
Uye isu tinotora iwo mukana kuunganidza zvese zvedu DIY tutorials muchikamu chimwe chete chine zvinyorwa zvina zve DIY Photography, asi isu tatova netumwe tumwe tunyengeri pane izvo zvinyorwa.
Nzira yekugadzira imba yekugadzira dehumidifier
Zvakareruka zvakagadzirwa, pasina chero zvemagetsi kana michina. Ngatiitei dehumidifier kutora unyoro kubva kumakamuri edu, makamuri kana chero kwatinoda.
Tinogona kutaura nezvemhando mbiri dzevadzvinyiriri:
Desiccants anoshandisa silica gel
Iine compressor uye condensers
Tiri kutaura nezve nzira yehunyoro hushoma, yakanakira makabati nenzvimbo dzakapfigwa.
Haisi mushonga wekupedzisira, zvinongotibatsira kuve nharaunda yakaoma.
Kwenzvimbo diki, mumidziyo
Handizive kana iwe uchizviziva, asi zvitoro zvehardware nemashopu epamusoro anotengesa mabhokisi epurasitiki anotora mwando
Maitiro ekugadzira yako wega Viking doro mug
Uri cervercero here? Zvakanaka, izvi hazvigone kushayikwa mumba mako. Uye kana usiri, ndicho chakakodzera chipo, chakaitwa nemaoko ako pachako ... Ngatione maitiro ekugadzira mukombe wedoro reViking.
Iyo "Viking" ndizvo zvinotaurwa nemudzidzisi ini handina kuratidza kuti maViking akazviita saizvozvo. Asi isu tinotora rezinesi nekuti iri chaizvo, yakanaka kwazvo DIY kunze kweMirayiridzo.
Jagi rakagadzirwa kubva padanda remuti uye nemidziyo yakakosha, demo nebanga. Huni dzakasarudzwa dzave elderberry. Pakusarudza huni, zvakakosha kuti utarise zviyo uye zviyo zvehuni. Zvekuti harisi danda remuti, asi rakatsetseka uye riine tsinga dzakafanana, izvo zvinoita kuti kucheka kuve nyore.
Nzira yekuita sei mwana achipukuta
Kana iwe uri mubereki iwe unoshandisa iyo mucheche anopukuta uye ndechimwe chezvinhu izvo kubvira bvunzo iwe uchiziva kuti iwe ucharamba uchizvishandisa nekusingaperi.
Ini ndinounza dzidziso pa nzira yekuita zvinyoro nyoro, yatinogona kushandisa nemwana wedu zvakanaka kana kumushandisa mudzimba. A DIY yeiyo «caserotes».
Makapukuta atakatora akadhura zvakanyanya, kunyangwe zvichizonetsa kutsiva anotengesa neaya, ichokwadi kuti kana wapera uye zvitoro zvakavharwa kana kuti waenda parwendo kana mwana wako ane imwe mhando of kusashivirirana kumakemikari anowanikwa mune vekutengesa zvipukuta, ipapo dzidziso iyi inogona kuuya yakakunakira iwe.
Peji1 Peji2 ... Peji11 Zvadaro →